Tag: kutendeuka | Martech Zone
Nei Kambani Yako Inofanirwa Kutevedzera Live Chat
China, December 7, 2017 China, December 7, 2017 Douglas Karr
Takakurukura nezvakawanda mabhenefiti ekubatanidza mhenyu kutaura pawebhusaiti yako mune imwe yedu yekushambadzira podcast. Ive neshuwa yekugadzirisa mukati! Rarama rarama inonakidza mukuti iwo manhamba anopa humbowo hwekuti haingogone kubatsira chete kuvhara mamwe mabhizinesi, inogona zvakare kugadzirisa kugutsikana kwevatengi mukuita. Vatengi vanoda rubatsiro asi, mumaonero angu, havadi kunyatsotaura nevanhu. Kufona, kufamba nemifoni miti, kumirira kwakamira, uyezve kutsanangura
China, August 20, 2015 China, August 20, 2015 Douglas Karr
Mumwe wevadzidzi vedu ari kutsvagurudza nekunyora kwekutanga ongororo kwatiri aibvunza kana ndaive nemazano ekuti ungawedzere sei tsvagiridzo iyi kuona kuti zvemukati zvakatenderedzwa uye zvinomanikidza. Kwemwedzi wapfuura, tanga tichiita ongororo naAmy Woodall pamaitiro evashanyi anobatsira nemubvunzo uyu. Amy ane ruzivo rwekutengesa mudzidzisi uye mutauri weveruzhinji. Iye anoshanda pamwe chete nezvikwata zvekutengesa pakuvabatsira kuziva zviratidzo zvechinangwa